Isicwangciso sokubhala indlela yakho kwiSikolo sakho esikhezulu
Phantse zonke iifayili zesicelo sezinga leekholeji njengento ebalulekileyo okanye ebaluleke kakhulu kwinkqubo yabo yokungena. Isininzi esilungileyo esenziwa ngokufanelekileyo singenza ukuba umfundi we-stellar alahlekelwe. Kwiphepha le-flip, iincwadana ezikhethekileyo zesicelo zinokunceda abafundi abanamanani amanqaku afumaneke kwizikolo zamaphupha abo. Iingcebiso ezingezantsi ziya kukunceda ukuba uzuze omkhulu kunye nencoko yakho. Kwakhona qiniseka ukuba uhlolisise ezi ngcebiso malunga neenketho ezisixhenxe zesicatshulwa kwisicelo esiqhelekileyo, le ngcebiso ekuphuculeni isitayela sakho sencoko , kunye neesampuli zentsingiselo .
Gwema uLuhlu kwi-Essay yakho yesicelo
Uninzi lwabafake izicelo zeekholeji benza impazamo yokuzama ukubandakanya zonke iimpumelelo zabo kunye nemisebenzi kwisicatshulwa zabo zesicelo. Ezi zincoko zifundeka njengoko ziyiyo: izintlu ezilukhuni. Ezinye iindawo zesicelo zinika indawo eninzi yokuba uluhlu lwemisebenzi yangaphandle, ngoko gcina izintlu zakho kwiindawo apho zingabakho.
Iingqungquthela ezithatha inxaxheba kwaye ezinamandla zixelela ibali kwaye zijolise ngokucacileyo. Ngokusebenzisa iinkcukacha ezikhethiweyo, ukubhala kwakho kufuneka kubonakalise ukuthanda kwakho kwaye kubonakalise ubuntu bakho. Ukuxubusha okucacileyo kunye okucacileyo kwimeko enzima ebomini bakho kubonisa okungakumbi malunga nawe kunoluhlu lweemincintiswano eziphumeleleyo kunye neentlonelo ezifezekileyo. Amabanga akho kunye namanqaku akhombisa ukuba uhlakaniphile. Sebenzisa isicatshulwa sakho ukubonisa ukuba ucingisise kwaye uqokelele, ukuba ubuntu bakho bunzulu.
Yongeza I-Touch of Humor
Nangona kubalulekile ukuba ucingisise kwaye uqokelele, awufuni ukuba isayili yesicelo sakho sekholeji sinzima kakhulu.
Zama ukunciphisa isicatshulwa ngesalathisi esinengqondo, ubuqili obuhle, okanye ukuhlaziywa okuncinci. Kodwa musa ukuyidlula. Incoko ezaliswe ngeempopho ezimbi okanye amahlaya angabikho kombala uya kuphelisa ekugqibeleni. Kwakhona, ukuhlaziya akuyifaki indawo yezinto. Umsebenzi wakho oyintloko kukuba uphendule isicatshulwa ngokukhawuleza; Umomothekayo owuzisa kumlomo womfundi wakho ibhonasi (kunye nezinyembezi ngamanye amaxesha kunokusebenza kakuhle).
Abafundi abaninzi baye banqatshwa ngenxa yokungaphumeleli ngokukhawuleza kunye nokubhala izicatshulwa eziphelisa ukuba zizilumko kunobulumko.
Hhayi nje ukuhleka, kodwa i-tone yesicelo sakho incoko ibaluleke kakhulu. Kwakunzima ukufumana okulungileyo. Xa uceliwe ukuba ubhale malunga nokufezekisa kwakho, loo mazwi angama-750 malunga nokuba uninzi kangakanani unokukwenza ube ngathi u-braggart. Qaphela ukuba ulinganise ukuzingca kwakho kwimpumelelo yakho ngokuthobeka nokupha abanye. Ufuna ukunqanda ukuzwakala njenge-whiner-sebenzisa isicatshulwa sakho ukubonisa izakhono zakho, ukuba ungachazi ukungabi nabulungisa okukhokelela kumanqaku akho aphantsi ematriki okanye ukuhluleka ukuphumelela # 1 kwiklasi lakho.
Utyhila Ubuntu bakho
Kanye kunye nencoko, ininzi iikholeji "umlinganiso kunye neempawu zabantu" njengobaluleke kakhulu kwizigqibo zabo zokuvuma. Umlingiswa wakho uboniswa kwiindawo ezintathu kwisicelo: udliwano-ndlebe (ukuba unayo), ukubandakanyeka kwakho kwimisebenzi yechungechunge , kunye nencoko yakho. Kwezi zintathu, isicatshulwa sisona esona sihamba ngokukhawuleza kunye nokukhanyisa kubantu abamukelwayo njengoko befunda ngeenkulungwane zezicelo. Khumbula, iikholeji azijongi nje ngokuthe ngqo "I-A" kunye nezikolo eziphezulu ze-SAT.
Bafuna abantu abalungileyo kwimimandla yabo yoluntu.
Iingxaki zegrama, iimpazamo zokubhala iimpawu zokupasa, kunye neempazamo zepelisi zingalimaza ithuba lakho lokuvunyelwa. Xa ukugqithiseleyo, ezi mpazamo ziphazamisa kwaye yenza isicatshulwa sakho sovavanyo silunzima ukuyiqonda. Nangona kukho iimpazamo ezimbalwa, kunjalo, ingaba isiteyathelo malunga nawe. Bonisa ukungabikho kolondolozo kunye nokulawula umgangatho emsebenzini wakho obhaliweyo, kwaye impumelelo yakho ekolishi ngokuxhomekeke kwizakhono zokubhala ezinamandla.
Ukuba isiNgesi asikho amandla akho amakhulu, khangela uncedo. Buza uthisha oyintandokazi ukuba ahambe phezu kweengcoko kunye nawe, okanye ufumane umhlobo onobuchule obuhle bokuhlela. Ukuba awukwazi ukufumana uncedo lweengcali, kukho ezininzi iinkonzo zesevisi zengqungquthela ezingakunika ukucoca ngokucophelela kokubhala kwakho.
Izizathu 5 Ufanele Ufunde "Iholide" Iingcaphuno Ngaphambi Krisimesi
Kutheni Abantu EBhayibhileni Bathwala Iingubo Zabo
Yintoni i-Carbon Fiber
Ama-Aztec kunye ne-Aztec Impucuko
Iincwadi malunga ne-Higgs Boson
Iingcebiso ezingama-20 zokuphumelela kwisikolo esiphakamileyo
Indlela yokudlala umfundi we-Seven-Stud Stud
Ama-Movie ama-Classic Classic ahamba noNatalie Wood
Ubomi nokufa kweArchduke uFranz Ferdinand
Ukumiswa - Ukulinganisa i-Hull yeVessel